somail1234.dk » Bogga hore
Tacsi u direynaa ehalahii iyo qaraabadii Muxumud Diriye
Maamulka iyo odayaasha iyo waxgaradka, dhalinyarada iyo dhamaan bushada markaz bilaal ee magaalada Århus Danmark waxay tacsi u dirayaan walaal Maxamed Muxumud Diriye (bismillah) oo ka mid ah gudiga maamulka markazka oo aabihiis Muxumud Diriye Maxamed ku geeriyooday qabridahare. waxaanu leenahay samir iyo iimaan allaah ha inaka siiyo aabe isgana janatulfidow allaah haka waraabiyo.
Maamulka Markaz Bilaal
Tafsiirka Quraanka kariimka 2013 (maalinta Sabti )
Masjidka waxaa ka bilaabmaya maanta oo sabti casharkii tafsiirka Quraanka kariimka, ee hore noogu socon jirey hada waxaana laga bilaabayaa bilow hadana (surat Anas)
Rag iyo Dumar way ka soo qeyb gali karaan
maalmahana waa sabtida bacda salaad Magrib Inshaallah.
Sheekha aqriyana wa Sh. Abdijibaar (Badar)
Markaz bilaal Maalinta Ciida sidii caadada aheed waxaa ku tukan doona dumarka iyo ciyaalka, maalintaas markazku dugsigiisu wuxuu u diyaariyey Dumar, Gabdhaha iyo ciyaalka Reer Århus Qado fudud, cabitaan iyo macmacaano. sidii caadada aheedna ilmuhuna markaza banaankiis fodbold baa u diyaar inay iska ciyaaraan. salaadana waxaa la tukanayaa kl: 10:30 Dumar iyo Gabdho galiya!!”!
Reer Århus iyo nawaaxigeena waa welcome in ay ka soo Qeyb galaan Xaflada maalintaas .. Jazaakaallahu khair…
Dugsiga markaz bilaal
Furitaanka Dugsiga bacda fasaxa waa:
sabtida 04 August 2012 kl 10:30 inshallah
Maalintaasna waxaa dugsiga ka jira doona isbadalo badan oo xaga macalimiinta iyo fasalada iyo waqtiga, sidaas darteed waa muhiim waalidiintu iyo Ardeydu in ay ilaaliyaan waqtiga dugsiga…. jazakaAllhu khair
Markaz bilaal bisha barakeesan ee Ramadan waxaa ka jiri doona Afur iyo sahuur ee walaaladu is darsanayaan qofkii xiiseenaya, qofkii kale waa welcome oo wuu la afuri karaa walaaladaas, salaadaha taraawiixda iyo tahajudkana waa lagu tukandoonaa….Taraawiixda waa bacda cisha ee fiiri jadwalka masjid bilaal ee cishaha …Tahajudkana gadaal baanu ka soo sheegi doonaa waqtiga la tukanayo inshallah
Waqtiga Tahajudkana masjidku wuu ufuran yahay walaalada qofkii xiiseenaya in uu seexdo oo uu ku ictikaafo bishan barakeesan inshallah.
Qubeesna waanu isku dayeynaa in aan ka gaarsiino in aanu dhameeno musqushii qubeeska ee la dhisayey, ka hor 20 bisha ramadaan si loo helo dadka ku ictikaafayo meel ay ku qubeestaan inshallah.
Khudbo jumca 12:30
waana waqtiga winter inshallah
Tabaruco / Sadaqo Masjidka
Makatabad islaami (somali+Carabi)
Makatabada islaami (denish+english)
Masjid abuubakar minesota(usa)
Sh cabdiqani qardhaawi